कोरोनामा सरकारको हिसाबकिताब : खर्च ८ अर्ब ३९ करोड- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कोरोनामा सरकारको हिसाबकिताब : खर्च ८ अर्ब ३९ करोड
जेष्ठ ३१, २०७७ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च गरेको भनेको १० अर्बको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आन्दोलन चर्किएसँगै सरकारले शनिबार खर्चको फाँटवारी विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म १० अर्ब खर्च भयो भनेर सरकारले जानकारी गराएसँगै सदनदेखि सडकसम्म त्यसको विवरण मागिएको थियो ।
कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको निर्देशनमा सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार अहिलेसम्म तीनै तहमा गरी जम्मा ८ अर्ब ३९ करोड ११ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
अहिलेसम्म संघीय सञ्चित कोषबाट विभिन्न मन्त्रालयले जम्मा ४ अर्ब १० करोड ५५ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत सबैभन्दा बढी २ अर्ब ४० करोड २४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत एक अर्ब ५८ करोड ५२ लाख ८३ हजार ंरुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयमार्फत् ५ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी सात वटै प्रदेशले अहिलेसम्म कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि एक अर्ब ३० करोड ४ लाख ९९ हजार खर्च भएको छ । प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा ३६ करोड ४८ लाख ७० हजार खर्च भएको छ भने प्रदेश नम्बरमा ५ सबैभन्दा कम ७ करोड ७९ लाख ३० हजार खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहले २ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख ९४ हजार खर्च गरेको सरकारले जनाएको छ ।
त्यस्तै औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीमा ३ अर्ब ९० करोड ८८ लाख, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा एक अर्ब १२ करोड ५० लाख, जनशक्ति परिचालनमा ५ करोड ८३ लाख ३३ हजार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा १३ करोड ५५ लाख ९८ हजार र अन्य शीर्षकमा ४० करोड १५ लाख ९ हजार रुपैयाँ निकासा भएको सरकारले जनाएको छ ।
यसअघि संसद्मा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा तीनवटै सरकारका तर्फबाट ९ अर्ब ८७ करोड खर्च भएको जानकारी दिएका थिए ।
हेर्नुहोस् कहाँ कति खर्च भयो ?
प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७७ १२:०९
हाँस, रोएर केही हुँदैन
मानिसले सोच्दै नसोचीकन निस्केको खुसीको हाँसोलाई ऊ आधा बाटो नपुग्दै रोकेर रुन्चे हाँसो हाँस्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा हाँस्ने नयाँ तरिका खोज्नुपर्ने भएको छ ।
जेष्ठ ३१, २०७७ मोहन मैनाली
नेपालमा कोरोना वेगले फैलँदै जाँदा पनि लकडाउन चाँडै खुल्ला र झन्डै तीन महिनाको गुप्तबासपछि बाहिर निस्कन पाउँला भन्ने आशा जागेको छ । तर, अहिले बाहिर निस्कने बानी छुटेको छ । त्यसैले अब बाहिर निस्कँदा के कसो गर्नुपर्ला, के कसो गरौँला भनेर कल्पना गर्छु ।
घरबाट निस्केर अलि पर पुग्दा उताबाट आउँदै गरेको मेरो पुरानो साथीसँग भेट होला । दाहिने हातअलि अगाडि बढाउँला, ‘यस्ता बेलामा हात मिलाउनु हुँदैन’ भनेर आफ्नो हात तुरुन्तै पछाडि झड्कारौँला । त्यसपछि सधैँझैँ मेरा बन्द ओठ अलिकति पछाडि धकेलेर, गालाको तल्लो भाग अलिकति खुम्च्याएर मुसुक्क हाँसौँला ।
‘बेकारमा किन हाँसेको ? तँ हाँसेको तेरो साथीले देख्छ र हाँस्छस् ?’ आफैँलाई झपारौँला ।
तुरुन्तै सम्झौँला– हो त, मैले लगाएको गैँडाको सिङजस्तो चुच्चो भएको मास्कले बाहिरबाट आउन सक्ने कोरोनालाई रोक्ला, नरोक्ला थाहा छैन तर मेरो सुन्दर हाँसोलाई बाहिर जान भने पक्कै छेक्छ ।
त्यसपछि, आफैँ खिस्रिक्क परुँला । आफैँलाई उपहास गरेर रुन्चे हाँसो हाँसौँला (धन्न, मेरो मास्कले गर्दा साथीले मेरो रुन्चे हाँसो देख्न नपाउला) ।
झन्डै तीन महिनापछि अफिस पुग्दा आफूसँग मिल्ने साथीहरूसँग भेट होला । उनीहरूसँग नजिक जानु भएन, लामो समयपछि भेट भएकोमा अचम्म मान्दै दह्रो गरी हात मिलाउनु पनि भएन । त्यसैले, त्यतिबेला उनीहरूभन्दा एक मिटर टाढा पुगेपछि टक्क रोकिएर मुख र आँखा प्रफुल्लित पारेर, सम्पूर्ण गाला र आँखाका कोष खुम्च्याएर, अगाडिका १७/१८ वटा दाँत देखिने गरी ओठ खोलेर हाँसौँला ।
‘धइततेरिका ! के गरेको ? मास्क लगाएर हाँस्नुको के अर्थ हुन्छ ?’ हाँसो पूरा हुन नपाउँदै मास्क लगाएको थाहा पाउँला । अनि हिस्स परेर रुन्चे हाँसो हाँसौँला (अहिले पनि रुन्चे हाँसो साथीहरूले देख्न नपाएकोमा दंग परौँला) ।
काँध र टाउकोसमेत हल्लाएर, नाकका पोरा फुलाएर, गाला र आँखा खुम्च्याएर आँखाबाट आँसु झर्ने गरी हाँस्ने दिन पनि त हप्तामा एकपटक जति त आउला, पहिलेजस्तै गरी । ठूलो स्वरमा कराएर उन्मुक्त हाँसो हाँस्ने बेला पनि त आक्कलझुक्कल आउला । त्यस्ता बेलामा मैले सोच्नुपर्ला– नाक र मुख छोपेर यस्तो हाँसो हाँस्दा काँध र टाउको मात्र हल्लिन्छन्, आँखाका छेउ मात्र अलिकति खुम्चिन्छन् । त्यसपछि मेरो यस्तो हाँसो कति कुरूप देखिँदो होला भनेर मैले यसलाई बीचमै रोक्नुपर्ला ।
आमाको गर्भमा रहेको ४२ दिनका दिन मैले सिकेको सीप बेकार होला । हाँसो निकाल्ने मेरो अनुहारका सत्र जोडी मांसपेशी र मेरो मुखवरिपरिको गोलो मांसपेशी अलमलिएलान्– आफ्नो काम गर्न खोज्दा बीचमै रोकिनुपर्दा ।
त्यसो भए अब खाना खाने, चिया खाने, खाजा खाने र सुत्ने समयजस्तै गरी हाँस्ने समय पनि छुट्याउनुपर्ला । एक्लै बसेका बेलामा, मास्क लगाउनु नपर्ने बेलामा मात्र हाँस्नुपर्ला किनभने यति बेला मैले मेरो हाँसो बीचमै रोक्नु पर्दैन । त्यति बेला म निर्धक्कसँग हाँस्न पाउँछु ।
तर, एक्लै बस्दा बारम्बार हाँस्नु के बिरामको लक्षण हो भनेर सम्झिउँला र त्यसो गर्न डराउँला ।
सम्झिउँला– हाँसो मूलतः सामाजिक प्राणीका हैसियतमा समूहमा बस्दा गरिने काम हो । मानिस एक्लै बस्दाभन्दा अरू मान्छेसँग बस्दा बढी हाँस्छ । अरूसँग कुराकानी गर्दा बढी हाँस्छ । हाँसौँ भनेर बल गरेर होइन, थाहा नपाईकनै, यत्तिकै सहज ढंगले ।
हाँसोबिनाको निर्जीव, नीरस, फिक्का अनुहार हेर्नु र त्यस्तो अनुहार बोकेको मानिससँग कुराकानी गर्नु कति दिक्कलाग्दो काम हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ १ निकै वर्षअघि मेरो कुर्सीका छेउको कुर्सीमा बस्ने, मेरो अफिसको एक जना साथीको मुखको एउटा पाटो प्यारालाइसिसजस्तै भएको थियो । उनको एउटा आँखो चिम्लिइँदैनथ्यो, एउटा गालाको मांसपेशी खुम्चिदैनथ्यो । उनले हाँस्न मिल्दैनथ्यो ।
अहिले हामीलाई प्यारालाइसिस त भएको छैन तर अवस्था उस्तैउस्तै छ । आफ्ना मनका भावना बताउने बडो सजिलो उपाय थियो– हाँसो । हाँसोमार्फत गरिने अभिव्यक्ति बुझ्न मानिसलाई बोलेर, लेखेर गरिने अभिव्यक्ति बुझ्नजस्तो धेरै समय लाग्दैन । दस मिलिसेकेन्ड अर्थात् एक सेकेन्डको १०० भागको एक भाग समय भए पुग्छ । तर, के गर्ने हाँस्ने बेलामा १० मिलिसेकेन्डसम्म मास्क खोलेर तुरुन्तै बन्द गर्न मिल्दैन !
विषय वा प्रसंग नमिल्दा कसैको लेखाइ अथवा बोलाइको अर्थको अनर्थ लाग्न सक्छ । तर, हँसाइको कहिल्यै अनर्थ लाग्दैन । हाँस्नेले खुसी प्रकट गर्न खोजेको छ भने बुझ्नेले यो खुसी भएछ भनेर बुझ्छ । उदेक लागेका बेलाको हाँसो परैबाट टड्कारै छुट्टिन्छ । कपटी हाँसो हाँस्नेले कपट गर्‍यो भन्ने पनि सजिलै बुझिन्छ । कोही मेरो उपहास गरेर हाँस्यो भने यो कुरा कुरा म दुरुस्त बुझ्छु । ‘म तिम्रो मित्र हुँ’ भन्ने बताउन कोही हाँस्दा ‘तैँले मलाई शत्रु ठानिस्’ भनेर कसैले भन्दैन ।
अरू अभिव्यक्तिभन्दा सजिलै बुझिन्छ हाँसोको अभिव्यक्ति । तर, हाँस्ने अर्थात् ‘मुखको मुद्रा र कान्तिले हृदयको खुसी वा आनन्द प्रकट गर्ने, खुसी हुने, ...दंग पर्ने, अर्काको गिल्ला गर्ने, उपहास गर्ने’ कामसँग कोरोनालाई उठ्नु रिस उठेको रहेछ । गिल्ला गर्ने र उपहास गर्ने काम गर्न नपाउँदा उति सारो चित्त दुखाउनु पर्दैनथ्यो मैले तर खुसी र आनन्द प्रकट गर्न र दंग पर्न नपाउँदाचाहिँ यस्तो गराउनेको उपहास गरेर हाँस्न मन लाग्छ । मलाई उदेक किन पनि लागेको छ भने हाँस्न जान्ने प्राणी मानवले मात्र हाँसो छोपिने गरी मास्क लगाउनुपरेको छ । जुनजुन प्राणी उन्मुक्त भएर हाँस्दा उनीहरूलाई कोरोनाबाट केही खतरा आइलाग्दैन अर्थात् जुनजुन प्राणीले मास्क लगाउनुपरेको छैन तिनले हाँस्न, हाँसोको मजा लिन जानेका छैनन् ।
हाँसो मानिसको अभिव्यक्तिको सबैभन्दा पुरानो तरिका हो । बोली र लिपिको भाषा त मानिसले पछि सिकेका हुन् । त्यसअघि हाँसो र इसाराले नै त काम चलेको थियो ।
हाँसोलाई भाषाको बारले छेक्दैन । बोली र लेखाइजस्तो त्यही भाषा बोल्ने र लेख्ने मानिसले मात्र बुझ्ने अभिव्यक्ति होइन हाँसो । बोलाइ र लेखाइको मेरो भाषा नबुझ्नेले पनि मेरो हाँसोको भाषा सजिलै र दुरुस्त बुझ्छ ।
हाँस्न नपाएपछि अरूले मलाई के ठान्दा हुन् ? मनको कुरा अनुहारमा देखाउने तरिका उपयोग गर्न नपाएपछि मानिसले मलाई म जे हुँ त्योभन्दा बिलकुलै फरक ठान्न पनि त सक्छन् । ‘जसजसले मेरो अनुहारको अभिव्यक्ति देख्न पाउँदैनन् उनीहरूले मलाई कसरी साथी ठान्लान् र ?’
हाँस्दा अरूले मात्र आनन्द पाउँदैनन् रे, हाँस्नेको मन पनि आनन्दित हुन्छ रे । त्यसैले, मास्कले मुख छोपेकै बेलामा पनि हाँस्दा आधाआधी फाइदा त पाइएला कि ? होइन, आधाउधी हाँसिसक्दा नसक्दै, हाँस्नु बेकार छ भनेर हाँस्न रोकेर रुन्चे हाँसो हाँस्दा हाँस्नेको मन कसरी आनन्दित हुन्छ र ?
त्यसैले त, भारत र नेपाललगायतका ठाउँमा मे महिनाको पहिलो आइतबार मनाउने गरिएको विश्व हाँसो दिवस यसपालि हाँसो नसुनीकन गयो । पश्चिमाहरूले अक्टोबर महिनाको पहिलो शुक्रबार मनाउने हाँसो दिवस पनि मास्कभित्रै गुम्सिएर जान के बेर र ?
यसो हुँदा मानिस अझ बढी उदास हुन्छ ।
कोरोना मात्र होइन राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक र सामाजिक दृष्टिले पनि यो समय उदास छ, मानिस उदास छन् । यस्ता बेलामा हाँस्नु किन पर्‍यो, हाँस्न नपाउँदा यत्रो दुःखमनाउ किन गर्नुपर्‍यो ?
यस प्रश्नको जवाफ चार्ली च्यापलिनले सन् १९३६ मा ‘मोर्डन टाइम्स’ नामक फिल्मका लागि बनाएको संगीतमा सन् १९५४ मा जोन टर्नर र जेफ्रिपासनले लेखेको अनि माइकल ज्याक्सनलगायतका धेरै गायकले गाएको गीत ‘स्माइल’ मा छ । यो गीतले भन्छ : मुटु दुख्दै छ, टुट्दै छ भने पनि हाँस । आकाशमा बादल लागेको भए पनि हाँस । सबैतिर डरैडर र दुःखैदुःख भए पनि हाँस, भोलि तिम्रो जीवनमा घाम लाग्न सक्छ । हाँस, रोएर केही हुँदैन । तिमी हाँस्यौ भने तिम्रो जीवन मूल्यवान रहिरहन्छ ।
हाँसोलाई मास्कभित्र गुम्स्याएर राख्ने दिन पनि आउँछ भन्ने थाहा पाएका भए गीतकारहरूले हाँस भन्ने थिए कि थिएनन् ? अथवा, त्यस्ता दिन आए भने झन् बढी हाँस्नुपर्छ पो भन्थे कि ? जवाफ छैन । त्यसैले, मानिसले सोच्दै नसोचीकन निस्केको खुसीको हाँसोलाई ऊ आधा बाटो नपुग्दै रोकेर रुन्चे हाँसो हाँस्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा हाँस्ने नयाँ तरिका खोज्नुपर्ने भएको छ । अथवा, मास्क लगाउँदा पनि हाँसेको प्रस्ट देखिने खालको मास्क बनाउन सके पनि हुन्छ ।
-यो लेखमा उपयोग भएका केही–जानकारी ‘टाइम’ मा प्रकाशित ‘ह्वाट वी लुज ह्वेयन वी हाइड आवर स्माइल्स बिहाइन्ड अ मास्क’ र गार्डियनमा प्रकाशित ‘फेसियल अवेरनेस : द मिनिङ अफ स्माइल’ बाट लिएको हुँ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७७ ११:४७